'အဘွားနဲ့ ချစ်သူကြားမှာ ဗျာများရတဲ့ ကာရိုက်တာ ဆိုပေမယ့်လည်း အပြင်မှာတော့ အဲဒီ လိုမျိုးကြီး - Yangon Media Group
ဇွန် ၈ ရက်မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသလျက်ရှိသော ‘သားပိုက်ကောင်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြော ပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရွှေသမီး ..။
”ညီမက ကြားထဲမှာ ပရိသတ်နဲ့ ဝေးကွာနေတာဆိုတော့ အခု သားပိုက်ကောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ရုံတင်ပြသတာဆိုတော့ ပျော်ရပါတယ်။ သားပိုက်ကောင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ညီမက မေယဉ်ကျေးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး နေရာကနေပြီးတော့ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ မကြီး စိုးပေါ့နော်။ အဘွား သားပိုက်ကောင် မေမေကြီးပေါ့။ သားပိုက်ကောင် မေ မေကြီးကို အရမ်းသနားတယ်။
ကိုယ်ကတော့ စိတ်ရင်းနဲ့ ဆက်ဆံပေးပေမယ့်လည်း ဒါပေမယ့် အထင်အမြင်လွဲပြီး တော့ ပြောလာရင်ကိုယ်လည်း ခံစားရမှာပဲလေ။ သူ့ခံစားချက်တွေကို ကြည့်ပြီး တော့ ကိုယ်ပါလိုက်ခံစားရတယ်။ လူကြီး တွေရဲ့စိတ်ကို ပိုပြီးတော့လည်း နားလည်ခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာကျတော့ အဘွားနဲ့ ချစ်သူကြားမှာ ဗျာများရတဲ့ ကာရိုက်တာဆိုပေမယ့်လည်း အပြင်မှာတော့ အဲဒီလိုမျိုးကြီးဗျာများမှာမဟုတ်ဘူး။ အဘွားဆိုတာက ကိုယ်ရဲ့အမေ၊ အဖေကို မွေးဖွားထား တဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ညီမကအဘွားကိုပိုချစ်တယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ညီမနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့သူမှာလည်း အဘွားသာရှိခဲ့ရင် ညီမရဲ့ အဘွားရင်းတစ်ယောက်လိုပဲဆက်ဆံမယ်။ ညီမက အဘွားတွေကိုပိုချစ်တယ်။ ပိုချစ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ဖေဖေ မေမေကို မွေးထုတ်ပေးထားတဲ့မိခင်ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။
အဘွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရကတော့ ဖေဖေဘက်က အဘွားပေါ့နော်။ အဘွားနဲ့ဆိုရင် ငယ်ငယ် လေးတုန်းကလောက်ပဲ တွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဘွားကလည်းအသက်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ ဦးလေးတွေနဲ့ တာချီလိတ်မှာနေတယ်။ အဘွားနဲ့ တော်တော်ကြာကြာ မဆုံဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ၁ဝ တန်းတက် တော့ ညီမက အဆောင်မှာနေတုန်း အဘွားဆုံးသွားတယ်။အဲဒီတုန်းက တော်တော်ကိုငို ခဲ့ရတယ်။ အဘွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတစ်ခုပေါ့နော်။သားပိုက်ကောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုကြည့်ပြီးသွားရင် စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုတော့ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်”
ခေတ်မီ မီးပွိုင့်များ ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီး၊ လုပ်ငန်းအလုံးစ??
မာလီဘူ စံအိမ်ကြီးကို ရောင်းချလိုက်သော စင်ဒီခရောဖို့ဒ်နှင့် ရန်ဒီဂါဘာ
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် EU က GSP ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေမရှိဟု အလုပ်သမား ပြည်
တိုက်၍ ပျက်စီးသွားသော ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ မော်တော်ကားပေါ်မှ ဆေးခြောက် တန်ဝက် အက်ကွာဒေါ၌ ဖမ်းမ??